Darbininkams - Litauisch - Burmesisch Übersetzung und Beispiele
Sie suchten nach: darbininkams (Litauisch - Burmesisch)
Saliamonas turėjo penkis šimtus penkiasdešimt prižiūrėtojų darbininkams.
တည်ဆောက်ခြင်းအမှုတော်ကို စီရင်သောသူ အမှုတော်အုပ် ငါးရာငါးဆယ်ရှိ၏။
jei valgiau jos derlių neapmokėjęs ir jos darbininkams apsunkinau gyvenimą,
စရိတ်မကုန်ဘဲမြေအသီးအနှံကို ငါစား၍ မြေဆိုင်သောသူတို့ကို ညှဉ်းဆဲမိသော်၎င်း၊
Pinigus atiduodavo darbininkams ir už juos atlikdavo Viešpaties namų remontą.
o pinigus, rastus Viešpaties namuose, jie atidavė prižiūrėtojams ir darbininkams.
ဗိမာန်တော်၌ တွေ့သောငွေကို မှုတ်၍၊ အုပ်ချုပ် သောသူနှင့် လုပ်ဆောင်သောသူတို့၌ အပ်ပါပြီဟူ၍၎င်း၊
Jie perdavė juos darbų prižiūrėtojams Viešpaties namuose, o tie atidavė darbininkams, kurie tvarkė Viešpaties namus­
ဗိမာန်တော်ကိုကြည့်ရှုပြုစုသော သူတို့၌ အပ်သဖြင့်၊ သူတို့သည် ဗိမာန်တော်ကို ပြုပြင်ခြင်းငှါ လုပ်ဆောင်သောသူ၊
Tuos pinigus jis įsakė perduoti darbų prižiūrėtojams Viešpaties namuose, kad tie juos išdalintų darbininkams, kurie dirba Viešpaties namuose, užtaisydami jų spragas,
အကြောင်းမူကား၊ စပါးနင်းနယ်သောနွား၏ နှုတ်ကိုမချုပ်တည်းရဟုကျမ်းစာလာ၏။ တချက်ကား၊ လုပ်ဆောင်သောသူသည် အခကို ခံထိုက်ပေးသည်ဟု လာပြန်၏။
နားထောင်ကြ၊ သင်တို့လယ်ကွက်၌ ရိတ်သောသူတို့ကို လှည့်စား၍၊ အခမပေးဘဲနေသောကြောင့်၊ ထိုအခသည် ကြွေးကြော်လေ၏။ ရိတ်သောသူတို့၏ အော်ဟစ်ခြင်းအသံသည်လည်း၊ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေ အရှင်ထာဝရဘုရား၏ နားတော်ထဲသို့ဝင်လေပြီ။
“Su dangaus karalyste yra panašiai, kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynuogynui.
Jis sakė jiems: “Pjūtis tikrai didelė, o darbininkų maža. Todėl melskite pjūties Viešpatį, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį.
သူတို့အား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ စပါးရိတ်စရာများစွာရှိ၏။ ရိတ်သောသူတို့သည်နည်းကြ၏။ ထို ကြောင့် လုပ်ဆောင်သောသူတို့ကို စပါးရိတ်စေခြင်းငှါ စပါးရှင် စေလွှတ်တော်မူမည်အကြောင်း ဆုတောင်း ကြလော့။
ထိုသူသည် တနေ့လျှင် ဒေနာရိတပြားစီပေးမည်ဟူ၍ လုပ်ဆောင်သောသူတို့နှင့် ဝန်ခံပြီးမှ စပျစ် ဥယျာဉ်သို့ စေလွှတ်လေ၏။
Atėjus vakarui, vynuogyno šeimininkas liepė ūkvedžiui: ‘Pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo paskutiniųjų ir baigdamas pirmaisiais!’
ညအချိန် ရောက်သောအခါ စပျစ်ဥယျာဉ်ရှင်က လုပ်ဆောင်သော သူတို့ကိုခေါ်ခဲ့လော့။ နောက်ဝင် သောသူမှစ၍ အရင်အဦးဝင်သောသူတိုင်အောင် အခကိုပေးလော့ဟု မိမိစာရေးကိုမှာလိုက်လေ၏။
သို့မဟုတ် သင်တို့ထံသို့ ပြန်လာလိမ့်မည်။ ထိုအိမ်နေ၍ အစားအသောက်စီရင်ရာကို စားသောက်ကြ လော့။ အကြောင်းမူကား၊ လုပ်ဆောင်သောသူသည် အခကိုခံထိုက်ပေ၏။ တအိမ်မှ တအိမ်သို့လှည့်လည်၍ မ သွားကြနှင့်။
Juk tokie yra netikri apaštalai, apgaulingi darbininkai, besidedantys Kristaus apaštalais.
အကြောင်းမူကား၊ ထိုသူတို့သည် မိစ္ဆာတမန်တော်ဖြစ်ကြ၏။ ခရစ်တော်၏ တမန်ဖြစ်ယောင်ဆောင် ၍ လှည့်ဖြားတတ်သော အမှုစောင့်ဖြစ်ကြ၏။
susivadino juos bei kitus to amato darbininkus ir kalbėjo: “Vyrai, jūs žinote, kad šiuo amatu remiasi mūsų gerovė.
ထိုသူသည်ပန်းထိမ်သမားတို့နှင့် ထိုသို့သော အတတ်သမား များကိုစုရုံးစေပြီးလျှင်၊ အချင်းလူတို့၊ ဤ အတတ်ကိုသင်တို့သိကြ၏။
Saugokitės šunų, saugokitės piktų darbininkų, saugokitės apsipjaustėlių!
ခွေးတို့ကိုရှောင်ကြလော့။ မကောင်းသော အကျင့်ကို ကျင့်သောသူတို့ကို ရှောင်ကြလော့။ အရေဖျား လှီးခြင်းကို ခံယောင်ဆောင်သော သူတို့ကို ရှောင်ကြလော့။
အကျွန်ုပ်တို့သည် အစာရှောင်ခြင်း အကျင့်ကို ကျင့်သောအခါ၊ ကိုယ်တော်သည် အဘယ်ကြောင့်မြင် တော်မမူသနည်း။ အကျွန်ုပ်တို့သည် ခြိုးခြံစွာ ကျင့်သော အခါ၊ ကိုယ်တော်သည် အဘယ်ကြောင့် သိမှတ်တော်မမူ သနည်းဟုဆိုသော်၊ သင်တို့သည် အစာရှောင်သောနေ့၌ ကိုယ်တိုင်ပျော်မွေ့၍၊ ကျွန်တို့ကိုပင်ပန်းစွာ လုပ်စေကြ၏။
nei kelionmaišio, nei dviejų tunikų, nei sandalų, nei lazdos, nes darbininkas vertas savo valgio.
လမ်းခရီးဘို့ လွယ်အိတ်၊ အင်္ကျီနှစ်ထည်၊ ခြေနင်းတောင်ဝေးကို မသိုမှီးကြနှင့်။ အကြောင်းမူကား၊ လုပ်ဆောင်သောသူသည် ကျွေးမွေးခြင်းကို ခံထိုက်ပေ၏။
Todėl melskite pjūties Viešpatį, kad siųstų darbininkų į savo pjūtį”.
ထိုကြောင့် လုပ်ဆောင်သောသူတို့ကို စပါးရိတ်စေခြင်းငှါ စေလွှတ်တော်မူမည်အကြောင်း၊ စပါးရှင်ကို ဆုတောင်းကြလော့ဟု တပည့်တော်တို့အား မိန့်တော်မူ၏။
substanță (Rumänisch>Slowakisch)mi mama eva lopez (Spanisch>Englisch)prijateljski (Kroatisch>Italienisch)faci laba (Rumänisch>Englisch)음 (Koreanisch>Koptisch)in epulis (Latein>Deutsch)selamat atas kemenangan real madrid :) (Indonesisch>Spanisch)desiderata (Englisch>Griechisch)ka pun kap (Thai>Englisch)universitat (Katalanisch>Spanisch)ongelma (Finnisch>Italienisch)we met in hospital (Englisch>Tagalog)ricompilato (Italienisch>Englisch)joie de vivre (Französisch>Schwedisch)main aapko nahi bol sakta (Hindi>Englisch)bürgerschaft (Englisch>Lettisch)kanya kanyang sistema (Tagalog>Englisch)salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin (Tagalog>Englisch)flag this review! (Englisch>Italienisch)quod ient (Latein>Französisch)speaking correctly (Englisch>Tagalog)kasvumäärasid (Estnisch>Finnisch)mwen renmen ou fou (Französisch>Englisch)kyoto (Deutsch>Spanisch)trachinotus (Italienisch>Englisch)